Dagaal ka dhacey Xaafada Calanley gaar ahaan agagaarka laanta Ganacsiga ama Dalcada ee degmada Kismaayo – idalenews.com
Dagaal ka dhacey Xaafada Calanley gaar ahaan agagaarka laanta Ganacsiga ama Dalcada ee degmada Kismaayo
Si dad goob joog ahi soo wariyeen, waxaa magaalada Kismaayo ayaa gebi ahaan laga maqlayaa daryanka madaafiicda ay is dhaafsanayaan ciidamo kala taageersan qabaa’ilada Ogaden iyo Cawro-male. Dagaalku ku bilowdey ka dib markii ciidanka maamulka Jubaland ugu tunka weyn ee Axmed Madoobe ay is hor istaag ku sameeyeen mid ka mid ah sarkaal sare oo beesha coormale oo doonaayey inuu la kulmo wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya Fiqi oo isugu haatan ku sugan gudaha magaalada Kismaayo ku dhowaad 2 isbuuc.
Warar kale ayaa iyaguna sheegaya inuu dagaalku bilowdey ka dib markii la afduubey sarkaal ka tirsan ciidanka maamulkii kmg ee Kismaayo oo magaciisa lagu sheegay Sujuu ayaa ka mid ahaa ciidanka bada ee Raaskambooni waxaana saaka la afduubtay isaga oo aan wax diyaar garow ah ku jirin, sababta loo afduubtay ayaa lagu sheegay inay aheyd in ganacsato ka tirsan beesha Cawramaleh laga dhacay qaad ay la soo degeyn oo ay ka dhaceen ciidanka Raaskambooni.
Dagaalka ayaa waxaa uu yahay mid hadda toos la isku dhaafsanayo hubka noocyadiisa kala duwan. Waxaana dadka gebi ahaan magaalada ay joojiyeen isu socodkii.
Magaalada Kismaayo oo la ciirciireysa ciidamo hubeysan oo haddana kala ujeedo ah ayaa dagaalkan waxa uu ka dhigayaa kii ugu horeeyey oo waji qabiil ku bilowda, iyaddoo aan la ogeyn sida uu maamulka ka jira magaalada uga hortegi lahaa qaboojinta dagaalkan beeleysan.
Dhinaca kale waxaa wararka qaar sheegayaan in ciidamada kala taagersan madaxweynayaasha Jubaland ay dhici karto inay labada galab kala taageeraan, taasi oo haddii ay dhacdo dagaalka uu sida hadda uu yahay ka sii xoogbadan doonto.
War hadda na soo gaareyna waxuu sheegayaa in dagaalka maanta ay ku dhinteen 4 qofood oo 3 ka mid ah ay ahaayeen ciidamadii dagaalamey uuna ku jirey sarkaal caan ka ahaa magaalada oo ka tirsanaa ciidamadii Raaskambooni laguna naaneysi jirey Cagaweyne, halka qofka 4aad ay aheyd haweeney rayid ah oo ay rasaasta dagaalka xaafada calanleey ay haleeshay.
Ciidamada AMISON oo ku hubeysan gaadiidka gaashaaman ayaa ku soo baxey dagaalka ka socdo qeyb ka mid ah xaafada Calanleey iyadoo doonaaya iney kala dhexgalaan beelaha dagaalamey deegaanka ee halkaas dagaalamaya.
Idale New ONline Kismaayo
Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya oo ka qeybgaley dhoolatus Militari oo Ciidamada XDS ee Kismaayo ku sugan soo bandhigeen
Madaxweynaha Maamulka Puntland C/raxmaan Faroole iyo Sheekh Axmed Madoobe oo ku kulmay Magaalada Nairobi ee dalka Kenya